Top 5 free Game ndekọ software 2015 n'ihi na window / Mac
Gaming na-egwu ya edekọ software omume na-mgbe choro elu site ọrụ na ọ bụ ihe niile ruru te eziokwu na ọrụ bụghị nanị bulite videos ka ma ama weebụsaịtị ma ọ na-eme ka n'aka na ihe kasị mma mkpebi na elu àgwà bụ n'ebe iji jide n'aka na na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi. Ọ na-na-kwuru na e nwere ọtụtụ egwuregwu ndekọ mmemme na-n'efu na maka otu ihe a na nkuzi e dere na ọ ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma N'ihi. Ọ na-na--ahụ kwuru na Mac OS na yiri free omume na-kpuchie na zuru mgbe ọ na-abịa a nkuzi.
Nkebi nke 1: Top 5 free Game ndekọ software 2015 n'ihi na windows
Nkebi nke 2: Top 5 free Game ndekọ software 2015 n'ihi na Mac
Ndepụta nke n'elu 5 free egwuregwu ndekọ omume bụ dị ka ndị a:
1. DVD video Soft free ihuenyo video edekọ
Egosipụta bụ ihe na siworo n'elu mkpa nke Ndị Mmepe nke a usoro na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà na omume na-ebudatara ina ihe mere na nri n'ụzọ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu dị ka nke a bụ ihe kasị mma omume na ndepụta:
2. Powder edekọ
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe omume nke na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ n'ime chaachaa na ndekọ nke egwuregwu na-eme na zuru okè n'ụzọ. Dị ka a mmemme vasatail ọ ga-eme n'aka na mkpebi na-nọ na-elu.
Ọ bụkwa otu n'ime omume nke e gosiri elu site ọrụ na maka otu ihe ahụ ọ na-e esịne ke ndepụta. Ihe nke abụọ mere nke usoro ihe omume e kwuru bụ eziokwu na ọ dị mfe iji na nwekwara ike idekọ egwu na oké ihe doo anya.
mmepe nke usoro ihe omume mere n'aka na ọ na-nọ mfe ma onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma n'ime oge na a raara maka egwuregwu kpọọ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na a novice ọrụ nwekwara ike iji ihe omume na oké ala ma doo anya na maka otu ihe ahụ ọ na-e gosiri dị ka onye nke kasị mma mmemme niile ugboro.
5. Ihuenyo ndekọ ụlọ
Irè nke usoro ihe omume nwere ike ikpe site na eziokwu na ọ na-eme dị ka a video kpọọ na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na usoro ihe omume ebudatara na ọhụrụ version agbakwunyere site na URL na e kwuru iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara nke usoro ihe omume e ebudatara.
Te mkpa nke Mac OS nwere ike ikpe site na eziokwu na ọ bụ nke abụọ kasị eji OS na ụwa mgbe windows na Ya mere ọ na-apụghị leghaara anya. Na-esonụ bụ ndepụta nke n'elu 5 free gsme ndekọ omume maka Mac.
1. Vixy teepu
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà omume na ike ga-eji na onye ọrụ iji jide n'aka na ihe kasị mma e arụnyere na na na ọ bụ kpam kpam n'efu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị nwalee omume juputara iji jide n'aka na-arụ ọrụ a na-eme na nke kacha mma n'ụzọ.
2. Max Video Capture
Dabere n'elu CPU nke usoro ihe omume nke a bụ ihe kasị mma na ọkaibe software nke na-eme n'aka na ojiji nke CPU a mere ka kwa mkpa na-achọ n'aka nke video a na-ebudatara na ya mere ọ bụ ihe kasị oru oma omume niile ugboro.
Ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume nke na-eme n'aka na nbudata nke faịlụ na-mere mfe ma dị mfe na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na omume na-ebudatara dị ka ọ bụ a ga-enwe maka usoro. The n'ozuzu irè dị ukwuu na usoro ihe omume e gosiri dị ka ndị kasị mma nke niile.
4. Open sara mbara nkedo software
Ọ bụ usoro ihe omume nke e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mkpokọta irè dị ukwuu mgbe ọ na-abịa egwuregwu ndekọ. Usoro ihe omume siworo kasị mma mgbe ọ na-abịa mkpebi na maka otu ihe ahụ ọ na-atụ aro ka niile gamers na-arụ ọrụ mere na àgwà na klas Ozugbo omume na-ebudatara.
Ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na-arụpụta bụ ihe kasị mma mgbe ọ na-abịa egwuregwu ndekọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ahụ ebudatara ma wụnye enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu si URL kwuru na-arụpụta ihe kasị mma
Tupu ihe ọ bụla na omume na-ebudatara na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ndị na-agụ tinyere onye ọrụ fim iji hụ na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na onye ọrụ bụkwa na-arụpụta ihe kasị mma. Egwuregwu ndekọ omume bụ nnọọ oké mkpa maka gamers na Ya mere onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na onye na-ewere na elu mkpebi video ebudatara zere oge n'efu na ihe ndị ọzọ yiri mbipụta.
> Resource> Game> Top 5 free Game ndekọ software 2015 n'ihi na windowmac